HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်DHMİ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ပြောင်းလဲအဆိုပါခဲမှအစီရင်ခံစာ Cancel
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, ရုပ်သံလိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ပြည်နယ်လေဆိပ်ကြိုတင် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းမှအုပ်ချုပ်ရေး, ထိုအကဲဖြတ်စီမံကိန်းအတည်ပြုချက်ဟုဖွဲ့သောညွှန်ပြ "ဟုအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ဆပ်လိမ့်မယ်" ။ ဤသည်အကဲဖြတ်နောက်ကျောက၎င်း၏အကဲဖြတ်နေတဲ့ခြေလှမ်းကိုယူနှစ်ပတ်အတွင်းနောက်ပိုင်းမှာ "အမှတ်တမဲ့" ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်မြို့ပြဝန်ကြီးဌာနလှူသောဖျောပွထားတဲ့အကဲဖြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
မာမွတ်Iıcalıသမ္မတနိုင်ငံကနေအစီရင်ခံစာအရ; စီမံကိန်းအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်အဖြစ်စတင် EIA ကို ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ပြည်နယ်လေဆိပ်လုပ်ငန်းရဲ့ (SAE) စီမံကိန်းကိုကလေဆိပ်ကသူတို့ကိုအသုံးမပြုနိုင်စေလိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်ယူဆချက်၏နှစ်ပတ်အတွင်းအစားထိုးခံရဖို့ထင်ရှား။ , ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တာလေဆိပ်ရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းကိုဆင်းချိုးမည်နှင့်အမှတ်တမဲ့စီမံကိန်းရဲ့အများဆုံးအနောက်ပိုင်းသည့်ဗျူရိုကရေစီပေါ်လေယာဉ်ပြေးလမ်းတိကျမ်းစာ၌လာသည်ဖိအားကျော်ဖြတ်သန်းသောအမြင်သည့်ဗျူရိုကရေစီအတွက်နေရာတစ်နေရာနှင့်မြှင့်တင်ရေးဖို့ key ကိုရှာတွေ့မှ "Dude ခရိုနီဆက်ဆံရေး, အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်နှင့်သစ္စာဟာ CHP လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ Muharrem အမျိုးသားများအတွက်လမ်းခင်းထုတ်ဖော်ပြသသောမြေပေါ်တွင်အစားထိုးခံရ အသီးသီး။ ဒီတော့အဘယျသို့ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဖြစ်ပျက်နေသည်အများပြည်သူအရာရှိများမှကုသိုလ်ယူခြင်းရှိသနည်း ဆုတ်ခွာ, လက်ျာအရာပြောဖိအားအောက်မှာဘယ်ဟာဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
5.8 အကြမ်းဖက်မှုများအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငလျင်အတွေ့အကြုံ; အဆိုပါအစီအစဉ်အပေါ်ပြန်လည်ဆွေးနွေးငြင်းခုံဆောင်ခဲ့အတွက် Unplanned မြို့ပြ, Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းကိုအပေါ်ဖြန့်ချိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ် (EIA) unplanned လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဓိကအရှုပ်တော်ပုံခံစားခဲ့ရသညျ။ နိုင်ငံတော်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်မြို့ပြန်ကြီးဌာန 27 2018 ပတ်သက်. လေဆိပ်အုပ်ချုပ်ရေး (Sama) အမြင်အားဖြင့်အစပျိုးသည့် EIA ကိုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းကြောင့်ဟုမေးခဲ့သည်။ DHMİလေဆိပ်များ၏သမိုင်းတစ်အငြင်းပွားဖွယ်ထုံးစံ၌မတ်လ 15 2018, 29 2018 အောက်တိုဘာလအပေါ်ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေကစေလွှတ်သည့် EIA ကိုအမြင်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများဖွင့်လှစ်ခဲ့ထောက်ပြသည်။
သေးပွင့်လင်းနေဖန်ဆင်းတော်စက္ကူ, "စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့အခြားဒေသများ, ပြည်တွင်းရေးမျက်နှာပြင်မှပိုမိုနီးကပ်စွာလာပြီဖြစ်ကြောင်းနေစဉ်ရာစုရဲ့စီမံကိန်းကိုအစ္စတန်ဘူလ်နယူးလေဆိပ် Mania အစီအစဉ်, အနောက်ပိုင်းလေယာဉ်ပြေးလမ်း၏ပြီးစီးကျော်ဖြတ်သန်းရာတကျန်ရှိသော Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းဧရိယာ၏ရှိပြီးသားသောအဘို့ကိုအပေါ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း, ကမ္ဘာ၏အဖွင့်ကိုစောင့်ဆိုင်းအပေါ်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ် ဒါဟာအလျားလိုက်မျက်နှာပြင်နှင့် conical မျက်နှာပြင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤစီမံကိန်းဟာလေယာဉ်ခရီးစဉ်အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့နယူးလေဆိပ်ဖွင့်လှစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ကြလိမ့်မည်။ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်နှင့် New လေဆိပ်စီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမထိခိုက်စေကြသည်မဟုတ်, ဖြည့်စွတ်ဖြစ်သင့် "အမြင်ကဆိုသည်။ ဤစာတမ်းမှာလေယာဉ်ပြေးလမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုတနေ့လုံးလေကြောင်းအသွားအလာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌လေဆိပ်လှမျးမိုးဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်း၏3500 တထောင်ဖြစ်ဟောကိန်းထုတ်သတ်မှတ်ထားသောသင့်လျော်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားမရခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး EIA ကိုအာဏာပိုင်, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြစီမံကိန်းန်ကြီးဌာနဒုတိယအစီရင်ခံစာကဆိုသည်ပြည်နယ်လေဆိပ်များမတ်လ 22 2018 အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအမြင်အစီရင်ခံတစ်ခုအတိအကျတပတ်အပြီး, အမှတ်တမဲ့ကျမ်းစာ၌ရေးထား၏အမြင်များတွင်ပထမဦးဆုံးအရပ်မှစာတစ်စောင်ကိုစေလွှတ်။ ,
DHMİခုနှစ်တွင်ဒုတိယဆောင်းပါး, "ဝယ်လိုအားအမြင်များ (27 ရက်စွဲပါဖေဖော်ဝါရီလ 2018) သင့်အက္ခရာမှရေးသားထားသောတုံ့ပြန်မှုအတွက်အကျိုးစီးပွားအဖြစ်အကျိုးစီးပွားအထွေထွေညွှန်ကြားမှုများအတွက် EIA ကိုလျှောက်လွှာဖိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏စာတစ်စောင်အမှားကရေးသားနေသည် (15 2018 မတ်လရက်စွဲပါ), စီမံကိန်းများအတွက် EIA ကိုလျှောက်လွှာဖိုင် related စီမံကိန်းများနှင့်လေ့လာမှုများကပြောပါတယ် ဒါဟာနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, အသေးစိတ်စာမေးပွဲနှင့်အကဲဖြတ်ပြီးနောက်လုပ်ပါလိမ့်မည်သည့်တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်း EIA ကိုလျှောက်လွှာဖိုင်ဝန်ကြီးဌာနသို့ပေးပို့ပါလိမ့်မည်ပေါ်မှာငါတို့အဆုံးစွန်အမြင် "ထုတ်ပြန်ချက်များအရပျကိုယူခဲ့ပါတယ်။
ဘီး 27 အစားထိုးခဲ့ကွောငျးဖျောပွDHMİအမှတ်တမဲ့အစားဆောင်းပါးတွေရေးသားထင်မြင်ချက်မတ်လ 2018 ရက်စွဲပါသစ်ကို EIA ကိုအမြင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟုဆိုသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း HDI အစ္စတန်ဘူလ်နယူးလေဆိပ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် Mania ကိုဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်များအတွက်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏အစီအစဉ်အထွေထွေအတွင်းဆက်လက်တည်ရှိတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နေချိန်မှာDHMİ, အ Ataturk လေဆိပ် Mania ကိုအစီအစဉ်အတွင်းစီမံကိန်းဧရိယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အမြင်, "Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်း၏သစ်ကိုစာတစ်စောင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟုဆိုသည် ညွှန်ကြားမှုလက်ရှိ Ataturk လေဆိပ်ကိုနောက်ကောက်အစီအစဉ်နှင့်စီမံကိန်းစံတွေနဲ့အစ္စတန်ဘူလ်နယူးလေဆိပ် Mania ကိုလိုက်နာမှုအတည်ပြု, channel ကိုမှားယွင်းစွာလေယာဉ်တစ်စင်းကိုလျှော့ချမည်အလင်းရောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေခြင်းဖြင့်မည်သည့်စနစ်ကထုတ်ပြန်ချက်များအတွက်ပေးခဲ့ "မသုံးသင့်ပေ၏အမြင်ဖြစ်ပြီးထင်ပါတယ်။
'' အမှန်အတိုင်းသိမြင်ဖိထားပါ ''
CHP လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ Muharrem အမျိုးသား, Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အာဏာရစီမံကိန်းအောက်ရှိ EIA ကိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်နေရာအရပ်ယူသောအရှုပ်တော်ပုံပြပွဲတူရကီအုပ်ချုပ်လို့မရပါဘူးကြောင်းထောက်ပြသည်ဟုပြောသည်။ အဆိုပါဗျူရိုကရေစီအတွက်နေရာတစ်နေရာနှင့် key ကိုမြင့်တက်လျက်ရှိသည်ကိုရှာဖွေရန်ဤ CHP အမျိုးသားများကဲ့သို့အတိုင်းလယ်ပြင်၌ဥပမာ, "Dude ခရိုနီဆက်ဆံရေး, အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်နှင့်သစ္စာရှိပါတယ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီတော့အဘယျသို့ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဖြစ်ပျက်နေသည်အများပြည်သူအရာရှိများမှကုသိုလ်ယူခြင်းရှိသနည်း ညာဘက်အရာပြောဖိအားအောက်မှာဘယ်ဟာဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဆုတ်ခွာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကရလဒ်များဖယ်ရှားပစ်ရန်နောက်ပြန်အမှတ်ဆွဲထုတ်။ ပေါ့ဆမှုနှင့်သတ်ဖြတ်မှုကြုံနေရမတော်တဆမှု, သဘာဝဘေးအန္တရာယ်, လေ့ကျင့်မှုကြောင့်အရည်အချင်းမရှိ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
သူတို့ကအစိုးရဖျက်ဆီးခံရခဲ့ကြောင်းသူကိုယောက်ျားအစဉ်အလာ၏နှစ်ပေါင်းရာချီအာဏာရအခြေချ, said: "အစိုးရအနေနဲ့ချေပပြောဆိုခဲ့သည်။ ခန့်အပ်ထားသောသံအမတ်ကြီးကြည့်ရှုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ၏အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများပြည်နယ်အဖြစ် Non-ကူးစက်ကွန်ယက်တွင်တဦးတည်းအစဉ်အလာယသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်အစပြု? ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသူတို့ကလေဆိပ်လုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတူရကီရဲ့သမိုင်း၌တည်၏။
ad hoc အလုပ်မှာ
တဖကျတှငျသူတို့အရူးစီမံကိန်းကိုပွုပါမညျဟုဆိုသည်။ unplanned အလုပ်အမှုကိုပြုလျက်ရှိသည်ဘယ်လောက်တစ်ခုကိုစဉ်းစားပါ။ တစ်ဦးကစီမံကိန်းအတွက်ကအခြားကြောင့်နှင့်အတူခေမသုံးနိုငျသညျ။ ထို့အပွငျမှန်ကန်စွာဖိအားနဲ့အမြင်အောက်တွင်ဗျူရိုကရက်တို့ကပြင်ဆင်သိပ္ပံနည်းကျနှင့်နည်းပညာအမြင်ပြောင်းလဲသွားကြောင်းသတိပေးရေးသားခဲ့သည်, တည်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်သဘောသဘာဝ, ပတ်ဝန်းကျင်, လူတွေ, သင်ဗျူရိုကရက်ပေါ်မှာဤဖိအားကိုတားဆီးမရနိုငျသောယခင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပျက်စီးစေပါ။ သငျသညျကိုနိုင်ငံတော်သစ္စာယဉ်ကျေးမှုချေပစီမံခန့်ခွဲပါ။ ဒါဟာအခြေခံကောင်းမှုကုသိုလ်နှင့်တရားမျှတမှုရှိရမည်။ သူတို့ကအစ္စတန်ဘူလ်အပ်နှံဖို့ဆက်လက်။ "
ပြည်နယ်လေဆိပ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းအာဏာပိုင်အထွေထွေမန်နေဂျာ Funda, 'DHMİတူရကီပျံပြေး' ' 29 / 01 / 2019 ပြည်နယ်လေဆိပ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်ဥက္ကဋ္ဌ Funda, တရားဝင် twitter account ကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစီမံကိန်းများကိုရှယ်ယာအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ ဤတွင်သူဇန်နဝါရီလမှ General Manager မျှဝေ: ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်, ဥရောပမှာရှိတဲ့အမြန်ဆုံးကြီးထွားဖေါ်ပြခြင်းအရပ်ဘက်လေကြောင်း၏လယ်ပြင်တွင်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းရရှိကမ္ဘာ့အရပ်ဘက်လေကြောင်း၏မကျြမှောကျ၌လေးစားသောအမှတ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဒီအောင်မြင်မှု၏လိုက်စားအတွက်လျှောက်ထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမူဝါဒများခြော 17 ဂရပ်ဖစ်ထိရောက်သောကြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွယ်တူချင်း၏ကမ္ဘာပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်, သင်တပ်ဆင်ထားပိုပြီးခေတ်မီလေဆိပ်နှင့်ဆိပ်ကမ်းကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။ DHM စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌လည်းအလွန်ကြီးစွာသောစီမံကိန်းကိုနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီးအဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦအဖြစ်အကောင်အထည်ဖော် ...
Marmaray နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား2500 တထောင်ရွက်လှေ Marina built ပါလိမ့်မည် 08 / 05 / 2013 Marmaray နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်Bayramoğlu2တထောင် 500 ရွက်လှေများစွမ်းရည်၏2တထောင် 500 ရွက်လှေ Marina ဟောင်းတိုင်းပြည်အစ္စတန်ဘူလ် built ပါလိမ့်မည် (နွေရာသီ) လေ့က, Marina ၏တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးတစ်ခုရပ်ကွက်အတွင်းတည်နေရာအတွက် Bayramoglu built ပါလိမ့်မည် Darica ခရိုင်ယနေ့ Kocaeli ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၏Darıcaမြို့တော်ဝန်Şükrü Karabacak ခရိုင် "ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေး," သူတို့ထွက်မတ်တပ်ရပ်ချင်, Bayramoglu သူတို့တည်ဆောက်ဖို့ 2.500 ရွက်လှေ Marina support ကဆိုသည်။ မြို့တော်ဝန်Şükrü Karabacak ဖော်ပြချက်ဟာခရိုင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Marina ဖို့ကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်သဖြင့်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 605ဒေါ်လာသန်းကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်နှင့်အတူ Elite Group မှအတွင်းပြောင်းဆန်ရဲ့ကမ်းခြေပြီးသားတည်ဆောက်ရန်စတင်လိုက်ပါပြီ။ Darica ယူနိုက်တက် ...
3 ။ လေဆိပ် 33 သန်းပေါင်မှကယ်တင် 14 / 03 / 2018 လျှပ်စစ်မီးနှင့်ရေငွေစု၏တထောင်အိမ်ထောင်စုစားသုံးမှုကိုဖန်ဆင်းခံရဖို့5500 နှစ်တန်းတူအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တတိယလေဆိပ်၌တည်၏။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်လေဆိပ်သစ်ငွေစုပေးပါလိမ့်မယ်။ တတိယလေဆိပ်, သဘောပေါက်ခံရဖို့လျှပ်စစ်မီးနှင့်ရေငွေစု၏ညီမျှ 195တထောင်အိမ်ထောင်စုစားသုံးမှုလောင်မှတစ်နှစ် 500 တထောင်အိမ်ထောင်စုပေါင်း။ ထို့ကြောင့်လေဆိပ်တစ်နှစ်လျှင်ငွေစု 33,2 သန်းပေါင်ရပါလိမ့်မယ်။ terminal မိုးရေ, ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အသစ်ပြန်လည်ရေနှင့်မီးခိုးရောင်ရေကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ terminal ကိုရာခိုင်နှုန်းကရေငွေစု 40 မှတက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပွငျ, စွမ်းအင်ချွေတာနှင့်အတူတစ်ဦးထက်ပိုထိရောက်လေအေးပေးစက်အတွက်ပြတင်းပေါက်မှတစ်ဆင့်နှစ်ဆတဖက်သတ်ကာကွယ်ပေးနိုင် terminal ကိုသဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်။ ဤအပြတင်းပေါက် xnumx'lik စွမ်းအင်မှတဆင့်ဒါ ...
Osman Hamdi ရဲ့ကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာ, Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အော်တိုမန်တစ်ဘဝကိုရှာပါ။ 30 / 05 / 2012 သမိုင်းသုတေသီ Turan Sahin ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကာလကနေအနာ, အမြစ်ဝနှင့်တံတားဟာ Bosphorus ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်, channel ကိုထံမှ Marmara ၏ပင်လယ်ပြင်အမျိုးမျိုးသောအောင်ပွဲ၏မှတ်ဉာဏ်ရှည်မှတက်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးရန်, ပင်လယ်နက်ချိတ်ဆက်မည်ဟုပျောက်ဆုံးသွားသောရတနာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းကထုတ်ဝေတဲ့ "အော်တိုမန်အင်ပါယာ၏ Crazy စီမံကိန်း" ဟုအဆိုပါစာအုပ်ကပြောပါတယ်ကလက်မှတ်ရေးထိုး ကအော်တိုမန်ကာလအတွင်းအလုပ်ရဲ့မူလအစီအစဉ်၏များစွာကိုဖော်ပြထားသည်။ Leonardo da Vinci ၏တံတားအောက်ပါအတိုင်းစီမံကိန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေ 41 အော်တိုမန်ရာစုနှစ်များစွာအများစုဟာနောက်ပိုင်းမှာအမှန်တကယ်ခြေလှမ်းများ "အရူး" စီမံကိန်းများအတွက်သိမ်းယူသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်သော်လည်းရှိရာစာအုပ်ထဲတွင်များမှာ! * အက်စ် Prerault CIS-i Enbub စီမံကိန်း (သံမဏိ subsea ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း): Sirkeci နှင့်Haydarpaşaဘူတာပထမဆုံးအဆိုပြုချက်ပေါင်းစပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထား ...
SOE DHMİအကောင့်တစ်နှစ်တာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူခဲ့ 2015-2016 ကော်မရှင်ပိုင်ဆိုင် 13 / 12 / 2018 ပါလီမန်ပြည်နယ်ပိုင်ဆိုင် Enterprises 2015-2016 တရားသေလွှတ်ပေးခဲ့သည်ယခုနှစ်များအတွက်ကော်မရှင်အတွက် (လည်ပတ်သော), နိုင်ငံတော်လေဆိပ်အုပ်ချုပ်ရေး (Sama) အထွေထွေချိန်ခွင်လျှာစာရွက်၏ညွှန်ကြားမှုနှင့်နောက်ဆုံးအကောင့်။ SOE ကော်မရှင်, ပြည်နယ်လေဆိပ်အာဏာပိုင် 2015 2016 နှစ်အကောင့်များနှင့်အရောင်းအများ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုဆွေးနွေးရန်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ပြည်နယ်လေဆိပ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်ဥက္ကဋ္ဌ Funda, ကော်မရှင်၏အဖွဲ့ဝင်ရန်သူ၏တင်ပြချက်ထဲမှာ, xnumx't ၏ဌာနချုပ် operating စတင်ရန်ကြောင်းပြန်ခေါ်, DHMİထံမှ 1933 56 လေဆိပ်များတွင်လုပ်ကိုင်အမှန်တကယ်လည်ပတ်ကပြောသည်။ မီးဖို, 49 ပုံမှန်လေကြောင်းပျံသန်းမှုများအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံ, နှင့်အနည်းဆုံးနှောင့်နှေးရေဒါစနစ်က 33, တူရကီအပါအဝင်ကြောင်းလေကြောင်းအညွှန်းအကူအညီစနစ်များ, ထုတ်ဖော်ပြောဆို ...
ပြည်နယ်လေဆိပ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းအာဏာပိုင်အထွေထွေမန်နေဂျာ Funda, 'DHMİတူရကီပျံပြေး' '
3 ။ လေဆိပ် 33 သန်းပေါင်မှကယ်တင်
Osman Hamdi ရဲ့ကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာ, Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အော်တိုမန်တစ်ဘဝကိုရှာပါ။
SOE DHMİအကောင့်တစ်နှစ်တာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူခဲ့ 2015-2016 ကော်မရှင်ပိုင်ဆိုင်
SAE လေကြောင်းအကယ်ဒမီ3။ ရာပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပပြီးစီး
အစ္စတန်ဘူလ်ဖျက်သိမ်း 70 ကီလိုမီတာ Metro နူးညံ့၏စိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည်